Xisbiga Liberal-ka oo ku guuleystay Doorashada Canada – Idil News
Natiijada horudhac ah oo laga helayo doorashada dalka Canada ayaa muujineysa in xisbiga Liberal-ka ee ra’iisul wasaaraha dalka Canada uu markale ku guuleystay awoodda dalkaas.
Inkastoo uu guuleystay Justin Trudeau ayaa haddana waxaa la sheegayaa in uusan helin kuraastii loo bahnaa ee aqalka barlamaanka, taas oo ku qasbi doonta in uu kaashakdo axsaabta kale ee dalkaas, si uu usoo dhiso dowlad isbaheysi ah.
Walow qeybihii hore ee codeynta uusan Justin Trudeau helin codadka gobolada bariga ee dalkaas ayaa haddana xisbigiisa waxaa uu filayaa in kuraas badan oo barlamaanka uu ka heli doono gobolladaas, taas oo u sahli doonta in markale uu talada dalkaas qabto.
Doorahsada dalka Canada ayaa loo arkaa afti lagu tijaabinayo taageeradaTrudeau oo fadeexado badan ay ku soo baxeen xilligii ololaha doorashada. Xisbiga Liberal ka ayaa loollan adag kala kulmayay xisiga midigta dhexe ee Conservative ee dalkaasi.